१२ बजे राती चिहान खन्ने युवक पहिलोपटक मिडियामा, मृ’तक जीवन ६ बर्ष पहिले यस्ता रहेछन, बताए कसैले नसोचेको मनै छुने भित्री कहानी ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
१२ बजे राती चिहान खन्ने युवक पहिलोपटक मिडियामा, मृ’तक जीवन ६ बर्ष पहिले यस्ता रहेछन, बताए कसैले नसोचेको मनै छुने भित्री कहानी ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
January 21, 2021 AdminLeaveaComment on १२ बजे राती चिहान खन्ने युवक पहिलोपटक मिडियामा, मृ’तक जीवन ६ बर्ष पहिले यस्ता रहेछन, बताए कसैले नसोचेको मनै छुने भित्री कहानी ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
१२ बजे राति चिहान खनेर मान्छे निकाल्ने साहशी दाइ पहिलोपटक मिडियामा आएका छन । उनले ६ बर्ष पहिले बितेका जीवन राईसङ्गै हुर्कीएका साथी समेत रहेका दाइले जीवन राइको सोच्नै नसकिने भित्री कथा सुनाउदा सबैका आँ’खा र’साए । उनै जीवन राईको आत्मा गाउँमा हरेक बिरामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्र’सित बनेको भन्ने खबर धेरै मिडियामा आयो ।
गाउमा धेरै युवतीहरु बिरामी पर्दै मुर्छा पर्न थालेपछी धेरै झाक्रीले चिन्ता बसे तर कसैले पत्ता लगाउनै सकेनन उल्टै झाक्री नै ढलेपछी झनै ग’म्भीर अवस्था सिर्जना भएको र अन्त्यमा ताप्लेजुङका झाक्री कृष्ण बिकलाई बोलाएर चिन्ता बस्न सुरु गरेर चार दिन चार रात नसुती धामी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दुर्घटनामा नि’धन भएका जीवन राईको चिहान खनेर हेर्नुपर्ने भनेर झाक्रीले भनेपछी सुरक्षाकर्मी र गाउले बुद्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रातको १२ बजे चिहान खने ।
करिब २०० मानिस भएपनी चिहान खन्ने आट कसैले गरेनन । तर एकजना साहसी दाइले चिहान खनेर नसोचेको काम गरेका छन । उनले पहिलोपटक मिडियामा आएर ६ बर्ष पहिले बितेका जिबनको भित्री कथा सुनाउदा सबैको आँसु खस्यो । उहासंग गरिएको पुरा कुराकानी हेर्नुहोस